တကယ်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း(မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဥက္ကဌကြီးဦးနေ၀င်း) ၁၉၆၂ခုနှစ်မှာအာ ဏာသိမ်းလိုက်ခြင်းဟာ… ဒီမိုကရေစီကိုသင်းကွပ်ပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်….သူအာဏာရချိန်ကစလို့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီဆိုတာလည်း ဆိပ်သုဉ်းသွားရရှာတယ်…၁၉၇၄မှာဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေကိုအတည်ပြုပြီး….တိုင်းပြည်ကိုတပါတီအာဏာရှင်စနစ်နဲ့သွားတယ်….စီးပွားရေးပုံစံမှာလည်း ဆိုရှယ် လစ်စီးပွားရေးဆို… .ပြည်သူပိုင်အခန်းကဏ္ဍကိုမှေးမှိန်အောင်လုပ်…တံခါးပိတ်စီးပွားရေး မူဝါဒကို ချမှတ်ပြီး…နိုင်ငံတကာရဲ့လာ ရောက်ရင်းနှီးမြုတ်နှံမူ့တွေကိုလက်မခံဘူး…အဲဒီတော့ဘာဖြစ်လာသည်း ဆိုတော့ …မှောင်ခိုစီးပွားရေးစနစ်ဟာ…မဆလအစိုးရခေတ်မှာအရမ်းကြီးထွားခဲ့တယ်….ကျနော်တို့ တိုင်းပြည် ကနည်းပညာအားနည်းတော့…ဘာများဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်တီထွင်နိုင်မှာ လည်း… .ပြည်တွင်း မှာထုတ်လုပ်တဲ့ခပ်ညံ့ညံ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲသုံးစွဲရတော့တယ်..….ကျနော်တို့ကျောင်းသားဘ၀က..တက္ကသိုလ် အဆောင်တွေမှာပေးထားတဲ့..ဆင်တဲထုတ်ရုပ်မြင်သံကြားတွေဆို…ဒီနေ့လူငယ်တွေတွေ့လိုက်ရင် ရီကြမှာ အမှန်ပဲ….ထင်းရူးသေတ္တာပုံးကြီးလိုဟာမျိုး….နောက်တခါအံ့အား သင့်စရာမဆလအစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ် တခုရှိသေး တယ်ဗျ….ပိုက်ဆံချမ်းသာလို့အဖမ်းခံရတယ်ဆိုရင်…ယုံမလား မသိ ဘူး..အဲဒါ တကယ်ပါ…ပိုက် ဆံချမ်းသာတဲ့သူတွေကို“ဆူဇကာစစ်ဆင်ရေး”ဆိုထောင်ထဲထဲ့ထားတယ်….သဘောကတော့…ဂုတ်သွေးစုတ်
အရင်းရှင်တွေပေါ့…ဒီလုပ်တွေလုပ်လာနေမှာတော့…ဒီတိုင်းပြည်မှမမွဲ..ဘယ်သူမွဲတော့မှာလည်း….ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံစာရင်းဝင်သွားတယ်….ဒီလိုနဲ့…၁၉၆၂စစ်အာဏာသိမ်းစဉ်ကပါဝင်ပြီး တော်လှန်ရေးကောင်စီလို့ခေါ်တဲ့
စစ်ကောင်စီမှာ အကြီးအကဲတယောက်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့…ဦးအောင်ကြီး( ဗိုလ်မူးချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီး- အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာ..ခနလေး ဥက္ကဌ ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူ ) သူက..ဦးနေ၀င်းဆီပေးပို့ ထား တဲ့..စာမျက်နှာလေးဆယ်ကျော်ပါစာတမ်းတခုကလူထုကြားထွက်ပေါ်လာတယ်လေ…..ဦးအောင်ကြီးဟာ ဦးနေ၀င်းရဲ့အမျက်တော်ရှမူ့ကြောင့်အာဏာရုတ်သိမ်းခံရသူတယောက်ပေါ့…..မဆလကနေ အထုတ်ခံလိုက်ရပြီး..ရန်ကုန်မြို့စမ်းချောင်းအရပ်ဒေသမှာလဘက်ရည်ဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားပြီး…နိုင်ငံကျော်“အောင်ကြီးကိတ်”ဆိုတာသူ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါ….သူ့စာတမ်းက..လူထုကြားမှာတော်တော်လေးပြန့်ပြန့်နှံ့နှံ့ရောက်သွားခဲ့တယ်…ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ဗျားဆို…အစချီထားပြီး…ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့…လူမူ့၊စီးပွား၊နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းတွေကိုတင်ပြထားတယ်….ဒါပေမဲ့သူ့စာထဲမှာဦးနေ၀င်းကိုတော့အပြစ်ဖို့မထားဘူး…ဒါတွေဦးနေ၀င်းမသိပါဘူးေးပါ့(သဘောကတော့…သူမသိလို့..ဒီလိုတွေဖြစ်နေရတာပါပေါ့)…နောက်တခါ၁၉၆၂အာဏာသိမ်းစဉ်က ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦကိုဗုံးဖောက်ခွဲပြီး..ကျောင်းသားအများအပြားသေဆုံးခဲ့ကြရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ..သူရော..ဦးနေ၀င်းရောနှစ်ယောက်လုံး..အပြစ်ကင်းမဲ့လေဟန်တွေပါ
ပါဝင်တယ်(၁၉၆၂အာဏာသိမ်းတော့စစ်အာဏာရှင်များဟာ…ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝန်းထဲမှာရှိတဲ့…ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦကိုဗုံးဖောက်ခွဲပြီးပစ်ခပ်နှိမ်နင်းတဲ့အတွက်ကျောင်းသားပေါင်းများစွာသေကျေခဲ့ရပါတယ်….များစွာ..ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခြင်းခဲ့ရပါတယ်…အဲဒါကိုတော့…ဆဲဗင်းဂျူလိုင်ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့လို့သမိုင်းတွင်စေခဲ့ပါတယ်…အဲဒီအချိန်ကစလို့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂကို တရားဝင်ရပ်တည်ခွင့်မပေးတော့တာအခုထိပါပဲ)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်…ဦးအောင်ကြီးရဲ့စာတမ်းကတော့…မျက်မှောက်အခြေနေနဲ့အနီးစပ်ဆုံးအံဝင်ဂွင်ကျဖြစ် သွားတဲ့အတွက်…လူထုကြားမှာ..တော်တော်..ဂယက်ထသွားပြီ…ဘယ်လောက်ထိဂယက်ရိုက်သလည်းဆို တော့ပါတီညီလာခံမှာ…ဦးနေ၀င်းကိုယ်တိုင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိစ္စ္ဂကိုဖြေရှင်းချက်ပေးရတော့တယ်…သူ့ဖြေရှင်းက…ဦးအောင်ကြီးကိုပဲ…ပြန်ပြီးလက်ညှိုးထိုးတရားခံအဖြစ်အပြစ်ဖို့သရောင်ရောင်ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပြောဆို ထားတယ်လေ….အဲဒီပါတီညီလာခံမှာပဲ…ဦးနေ၀င်းကနိုင်ငံရေးအစတခုကိုဟပေးလိုက်တယ်…တိုင်းပြည်ကို…တပါတီစနစ်နဲ့ပဲသွားမလား…ပါတီစုံစနစ်နဲ့ပဲသွားမှာလားဆိုတာ…အဆုံးအဖြတ်ပေးဘို့…ညီလာခံကိုတင်ပြခဲ့ တယ်…..အဆိုးဆုံးက…လူထုကိုစိမ်ခေါ်တဲ့စကားပြောဆိုသွားခြင်းပါ…ကျနော်တို့…တခုတည်းသောမြန့်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားကတဆင့်ပါတီညီလာခံကျင်းပတာကိုကြည့်လိုက်ရတယ်…ကျနော်မှတ်မိသေးတယ်….ဦးနေ၀င်းဟာ..မိန့်ခွန်းပြောဆိုနေရင်းက..ဒေါသတွေထွက်လာတယ်….(ကြည့်ရတော်တော်ကိုရုပ်ဆိုးတာပါ)…ဘာပြောသလည်းဆိုတော့…..“ဒီတခါတိုင်းပြည်မှာ..ဆူဆူပူပူလုပ်တဲ့သူတွေကိုသတိပေးချင်တယ်……စစ်တပ်ဆိုတာမိုးပေါ် ထောင်မဖောက်ဘူး…ပစ်ရင်မှန်အောင်ပစ်တယ်…နောက်တခါ ဆူဆူပူပူလုပ်လို့ကတော့…မလွယ်ဘူးသာပြင်”ဆိုတော့တိုင်းပြည်ကလူထုကပိုချဉ်သွားကြတော့တယ်….စဉ်းစားကြည့်ပါ…တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူ ပြောအပ်သောစကားလားဆိုတာ…..ဒါဟာ..ခေတ်အဆက်ဆက်ကျန်ရစ်နေတဲ့..ဦးနေ၀င်းရဲ့သမိုင်းဝင်မိန့်ခွန်းပါ….လူထုကဘာဖြစ်လာသလည်းဆိုတော့….ကြောက်လန့်မလာပဲ….ဒေါသတွေပိုထွက်လာကြတယ်…….နဂိုကမှ အထွေထွေအကြပ်အတည်းတွေငွေစက္ကူတွေကိုတရားမ၀င်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်..မကျေနပ်မူ့အဆိုင်အခဲက..ဦးနေ၀င်းမိန့်ခွန်းကြောင့်…ပိုဆိုးလာကြတယ်……
ကျနော်ဇာတိမြေကိုပြန်ရောက်တော့…ထူးခြားချက်တခုက…သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေများမှာပါတီဝင်များကနေ…ကျောင်းသားများကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ဘို့ကိုညွှန်ကြားထားတယ်လေ….ကျနော်ရေနံချောင်းပြန်ရောက်တော့…အိမ်ကခြံဝန်းအတွင်းမှာ စစ်ပြန်စစ်မူ့ထမ်းဟောင်း အမိန့်ရလိုင်စင်ထန်းရည်ဆိုင်ဌားတယ်…အဲဒီမှာ တာဝန်ခံလုပ်နေတဲ့…ဦးအံ့မောင်ဆိုတာသူကရပ်ကွက်ပါတီစိတ်မှုး…သူ့ကိုမြို့နယ်ပါတီယူနစ်က…တာဝန်ပေး ထားတာ..ကျနော့်ကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ဖို့ပေါ့…ကျနော်ကလည်း…ဟန်မပျက်နေရတယ်…သူကလည်းအရိပ်တကြည့်ကြည့်…ကျနော်အိမ်ကိုဝင်ထွက်သွားလာတတ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုအမြဲလေ့လာတယ်ပြီးရင်မှတ်တမ်းတင်တယ်…သတင်းပို့တယ်…..ဦးအောင်ကြီးစာတမ်းတွေကိုဖြန့်တော့….သူငယ်ချင်းတယောက်ကစာရွက်တွေကိုကော်ပီကူးလို့ရအောင်…လက်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးသူကဖန်တီးလာတယ်…လုပ်ရမဲ့နေရကလည်းမရှိ တော့…..ကျနော့်အိမ်မှာပဲကူးကြတယ်….ကျနော်ကတခုကြံရတော့တယ်…အခန်းထဲမှာဆိုရိပ်မိနိုင်တယ်… ဒါ့ကြောင့်အခန်းထဲမှာမကူးပဲ..အပြင်မှာပဲပေါ်တင်လုပ်တယ်….ဘယ်လိုလုပ်သလည်းဆိုတော့….ကူးပြီးသားစာရွက်တွေကိုဖွက်ထား…တရွက်ထွက်လာ..တရွက်ဖွက်ပေါ့….ဘေးနားမှာ…ဆယ်တန်းသချာင်္သင်ကြားချက် စာရွက်တွေကိုအသင့်ပုံထားတယ်…..ထင်တဲ့အတိုင်း….သူကလာကြည့်တယ်….ဘာတွေလုပ်နေကြတာလည်း ပေါ့….ဒါနဲ့ကျနော်က…“ကျောင်းအားရက်သုံးဘို့ပိုက်ဆံမရှိတာနဲ့…ကျူရှင်ကစာရွက်တွေကိုကူးရင်း..ပိုက်ဆံရှာ နေတာပါ ”လို့ဆိုတော့…သူကတရွက်ယူကြည့်ပြီး…အဖြေကိုကျေနပ်သွားပုံရတယ်…
ကျနော်တို့ဖြန့်လိုက်တဲ့ဦးအောင်ကြီး.စာတမ်းတွေကလည်း…လက်သိပ်ထိုးတော်တော်ပြန့်သွားတယ်….အဲဒီကာလတွေကရေဒီယိုအသံလွင့်ဌာနဆိုတာ..သုံးခုလားပဲရှိတယ်..ဘီဘီစီရယ်၊ဗွီအိုအေ၊အောအိန္ဒိယ …တသက်လုံးကရေဒီယိုနားမထောင်ဘူးတဲ့ကျနော်တို့တတွေ…အခုမပြတ်တမ်းနားထောင်နေရတယ်လေ…လူတွေတော်တော်များများလည်း..နားထောင်ကြတယ်….တိုင်းကျော်…လဘက်ရည်ဆိုင်မှာရေဒီယိုအသံလွင့် ချိန်ဆိုဆိုင်ရှင်ကဖွင့်ပေးထားတော့…လဘက်ရည်လာသောက်သူရောပြင်ပကသူတွေရောနေ့စဉ်လာနား ထောင်ကြတာအများသားလား….အဲဒီမှာ….သတင်းထောက်ခရစ္စတိုဖာဂါးနက်ဆိုသူကကျောင်းသားခေါင်း ဆောင်..ကိုဌေးကြွယ်၊ကိုဌေးအောင်၊ကိုတင်မောင်မောင်ထွေး၊ကိုကိုလတ်တို့နဲ့တွေ့ပြီး….အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ကျောင်းသူတွေထဲက…တစ်ယောက်ပေါ့..သူ့နဲ့အင်တာဗျူးခန်းကလူထုစိတ်ကိုနှိုးဆွစေခဲ့တာ..သူကအဖမ်းခံရ စဉ်မှာ..လုံခြုံရေးတပ်သားတွေရဲ့မုဒိန်းကျင့်ပုံတွေကိုပြောပြတယ်…ကြားရတဲ့လူထုရင်ထဲ..မခံစားပဲမနေနိုင်ကြ တော့ဘူး….မျက်ရည်ကျ.. ကြတယ်….
သတင်းတွေကပြန့်နေပြီ….အရပ်ထဲ..ရွာထဲ..ဈေးထဲ..ကျောင်းထဲ….ကျောင်းသားတွေ…ဆန္ဒပြကြတော့မယ်တဲ့…ဒါပေမဲ့….မဆလအစိုးရက..သိပ်ထိပ်လန့်ပုံတော့မပြဘူး…အရင်အခါတွေတုန်းကလို…နှိမ်နင်းပြလိုက်ရင် ပြတ်သွားမယ်ပဲထင်နေဆဲ….တနိုင်ငံလုံးမှာ..သူတို့ပါတီတွေ…လုံခြုံရေးတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးတပ်လှန့်ထားယုံကလွဲလို့အရမ်းကာရောကြီးတင်းကြပ်မထားဘူး…မြို့နယ်အသီးသီးက…အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာတော့ ဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကင်းစောင့်နေရတယ်….ကျနော်တို့အားလုံးစီစဉ်ရတော့တယ်…..အဲဒီမှာပြသနာကဘာလည်းဆိုတော့..ကျနော်တို့ကကျောင်းသားတွေ…၀င်ငွေမရှိဘူး….ပိုက်ဆံဆိုတာမိဘတွေကပေးမှမုန့်ဘိုးအဖြစ်ရကြတာ…နယ်အသီးသီးကိုသွားဖို့..ဆက်သွယ်ဖို့…စာရွက်စာတမ်းတွေဖြန့်ဝေဖို့ငွေလိုတယ်…လူတကာဆီလိုက်အလူခံလို့ရတဲ့အမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး….ဒါနဲ့လျှို့ဝှက်အစည်းဝေးထိုင်ဘာလုပ်ခဲ့ရသလည်းဆိုတော့….ချဲရောင်း မယ်…များများစားစားမဟုတ်ဘူး…၁၀ဘိုးအကွက်လားမသိဘူး..ဒါနဲ့လူခွဲပြီးလိုက်ရောင်းတယ်….တယောက်က မေးတယ်…ပေါက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလည်းဆိုတော့…ငါတို့က ၈ ရက်နေ့မှာလူထုအုံကြွမူ့စမှာ…ချဲက၁၅ရက်နေ့မှထွက်မှာ…အဲဒီတော့..ဒါထဲ့တွက်ဘို့မလိုတော့ဘူး…ပေါက်တဲ့သူရှိရင်လည်းတောင်းပန်လိုက်မယ်ကွာဆိုပြီး…ကိုယ်မြင်တဲ့အမြင်သေးသေးလေးလေးနဲ့ဖြေရှင်းခဲ့ကြတယ်…ချဲရောင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေနဲ့..နယ်အသီးသီးကိုသွားကြ…စာရွက်စာတမ်းတွေဝေကြပေါ့……
“ဟေ့ကောင်…ငါသတင်းအတိကျရထားပြီ…..ပါတီယူနစ်အတွင်းသတင်းကပေါက်ထွက်လာတာ….ငါတို့ကျောင်းသားတွေကိုဒီရက်ပိုင်းအတွင်းအကျယ်ခေါ်ပြီးထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မယ်…..အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မှာကျောင်းတက် နေတဲ့သူတွေဖြစ်ဘို့များတယ်…..”ကျနော်လည်းခေါင်းတော်တော်စားသွားတယ်..ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး…အတွေ့အကြုံကလည်းမရှိ…အသက်အရွယ်ကလည်းငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေဆိုတော့…ဆုံးဖြတ်ရခက်သွားတယ်..ဒါနဲ့ ကျနော်တို့ချက်ခြင်းလူစုပြီး…အစည်းအဝေးထိုင်တယ်….အားလုံးကသဘာတူညီစွာနဲ့…ဆန္ဒပြပွဲကိုသြဂုတ်လ၈ရက်နေ့လုပ်မဲ့အစားရှေ့တိုးပြီး၆.ရက်နေ့မှာစတင်ဘို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြတယ်…..ရက်ကအရမ်းနီးနေပြီ.. လုပ်စရာရှိတာစီစဉ်စရာရှိတာတွေကိုအသေးစိတ်စီစဉ်ရတော့တယ်….နောက်တခါရေနံမြေကအလုပ်သမားတချို့နဲ့ကျနော်တို့ကျောင်းသားတွေချိတ်ဆက်မိတယ်…သူတို့ပါ..ပါဝင်လာတယ်..
လူထုဆန္ဒပြပွဲကိုစတင်ဘို့…မြို့လယ်နဲ့မနီးမဝေးမှာရှိတဲ့…အထက(၁)ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်..ဒီ ကျောင်းက သမိုင်းအစဉ်လာကြီးတဲ့ကျောင်း…ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကစလို့ အရှင်ဆန္ဒာဓိကစာရေးဆရာမဂျူးတို့ပညာရည်နို့စို့ခဲ့ရာကျောင်းတော်ကြီး….တယောက်ကကျောင်းရဲ့မြေပုံကိုပြုစုတယ်…အဖွဲ့တွေအသီးသီးခွဲလိုက်ကြတယ်…..ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တိုင်းကျေနပ်မိတာတခုကကျနော်တို့အားလုံးကထင်ရာမြင်ရာတွေနဲ့စု ပေါင်းလုပ်လိုက်ကြတာ…နည်းနည်းတော့စနစ်ကျတယ်ပြောလို့ရပါတယ်…အဖွဲ့အသီးသီးခွဲပြီးဘယ်သူကဘယ် ကျောင်းဆောင်မှာတာဝန်ယူမယ်…ဘယ်သူနဲ့အဖွဲ့ကကျောင်းရှေ့တံခါးကိုပိတ်လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်တာဝန်…မြို့ထဲတလျှောက်ကနေကျောင်းအထိ..ကြားထဲမှာကျနော်တို့လူတွေတယောက်ပြီးတယောက်ချထားတယ်…အချိန်ကိုက်…တပ်လှန့်ထားတယ်….သတ်မှတ်တဲ့အချိန်ရောက်တာနဲ့မြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့လူထုကိုကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြပြီဆိုတာကိုဆော်သြဘို့ပေါ့…….
ကျနော်….၅..ရက်နေ့တညလုံးနီးပါးလောက်မအိပ်ရဘူး…ကြွေးကြော်သံစာရွက်ငယ်လေးတွေကူးနေတာ…မနက်လင်းခါနီးလောက်ကြမှတမှေးလောက်ပဲမှေးလိုက်ရတယ်…မနက်..၈နာရီလောက်ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ရင်း..ဆုံရပ်ရှိရာကိုထွက်လာခဲ့တယ်….လမ်းတလျှောက်ဖြတ်လာရင်းကြည့်လိုက်တော့ ရေနံမြေက အလုပ်သမားတချို့အနည်းငယ်အကွာဝေးဆီမှာမရောင်မလည်လုပ်ရင်းနေရာယူနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ တော်တော်အားတက်သွားမိတယ်…..
အထက(၁)ကျောင်းရှေ့မှာရှိတဲ့လဘက်ရည်ဆိုင်ကနေကျောင်းထဲကိုလှမ်းပြီးအဆက်မပြတ်အကဲခပ် ကြည့်လိုက်တော့..ကျောင်းဝန်းတံခါးအ၀င်ဝမှာဆရာတွေကကျောင်းသားတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတာကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်….ရှေ့တံခါးပေါက်မကြီးက၀င်ရောက်ရမှာက သုံးဦး…ကျနော်ရယ်…သက်နိုင်(ဒသာနိကဗေဒ)ကျော်ဆန်းဦး(မကွေးကောလိပ်)……အားလုံးကရင်ခုံနေကြတယ်….ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ကျနော်ခါးကြားမှာဓါးမြှောင်တိုလေးတချောင်းဆောင်လာတယ်…ပထမကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းထိုးသံကြားလိုက်ရပြီ……ရင်ခုံသံတွေက..အရင်ကထက်ပိုကျယ်လောင်လာပြီ….သုံးရောက်လုံးလဘက်ရည်ဆိုင်ကနေ…ထထွက်လာပြီးအသင့်နေရာယူလိုက်တယ်…ဒုတိယခေါင်းလောင်းထိုးပြီးရင်ကျောင်းတံခါးကိုပိတ်လိုက်တော့မှာ လေ…အချိန်ကနောက်ထပ်ငါးမိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်….ခပ်လှမ်းလှမ်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျော်လင်းနဲ့သူ့အဖွဲ့သားတွေက..ကျောင်းဝန်းတံခါးတွေကိုပိတ်ပြီးထိန်းသိမ်းထားဘို့အသင့်…ကျနော့်ကိုသူကလက်မထောင်ပြတယ်( အားလုံးအိုကေပေါ့ )…နောက် ကျောင်းနောက်ဖက်ကနေ ပတ်ဝင်ပြီး သွားမဲ့ကျော်စွာတို့အဖွဲ့ကခပ်သုတ်သုတ်ပြေးသွားပြီ…..သက်နိုင်ကကျနော်ကိုကပ်ပြီးတိုးတိုးလေး လှမ်းပြောတယ် …..
အပိုင်း ( ၃ ) ဆက်ပါဦးမည်
စပါးမျိုးစိတ်အစားထိုးစိုက်ပျိုးဖို့ ရခိုင်မှာ စီစဉ်